Liiska Hubinta ee Dhismaha iyo Suuqgeynta Codsigaaga Mobilka | Martech Zone
Isticmaalayaasha barnaamijka moobiilka badanaa si qoto dheer ayey u hawl galaan, akhriyaan maqaallo badan, dhagaystaan ​​qoraalada, fiiriyaan fiidiyowyada, lana falgalaan isticmaaleyaasha kale. Ma sahlana in la horumariyo khibrad moobiil oo shaqeyneysa, in kastoo!
Liiska Hubinta ee 10-Tallaabo ah oo lagu dhisayo & suuq loogu samaynayo App guuleysta wuxuu faahfaahinayaa habka loo baahan yahay ee ficil ahaan - tallaabo-tallaabo ah oo laga soo qaatay fikradda barnaamijka illaa la bilaabayo - si looga caawiyo barnaamijyadu inay gaaraan awooddooda buuxda. U adeegida qaab ganacsi oo loogu talagalay horumariyeyaasha iyo kuwa hal abuurka leh, macluumaadka 'infographic' wuxuu ka kooban yahay qoraallo aasaasi ah iyo isbaarooyinka hawlgalka iyo sidoo kale talooyin ku saabsan guusha guud.
Liiska Codsiga Moobaylka waxaa ka mid ah:
Istaraatiijiyadda Codsiga Moobaylka - magaca, madasha iyo sida aad u rabto inaad dakhli ku abuurto.
Falanqaynta Tartanka - yaa bannaanka jooga, maxay sameynayaan oo aysan sameynayn oo kala duwanaan kara barnaamijkaaga moobiilka?
Dejinta Websaydhka - halkee ayaad ku hormarin doontaa arjiga, ku ridi kartaa badhamada isticmaaleyaasha mobilada, ama geli macluumaadka meta ee soo bandhigaya barnaamijkaaga?
Dhisida Barnaamijkaaga - sidee ugu fiicnaan kartaa naqshadeynta adeegsadaha iyo aaladda oo aad bulshada ula qabsan kartaa?
Imtixaanka Isticmaalaha Moobilka App - sii daayo nooca beta iyada oo loo marayo qalab sida TestFlight si loo garto cilladaha, loo dalbo jawaab celin, loona ilaaliyo isticmaalka abkaaga.
Kordhinta App Store - shaashadaha shaashadda iyo waxyaabaha aad ka bixiso dukaanka barnaamijka wax weyn ayey ka beddeli kartaa haddii dadku soo dejiyaan iyo in kale.
Hal Abuurista Suuqgeynta - Waa maxay fiidiyowyada, isjiidka, sawirrada iyo sawir-gacmeedyada aad qaybin karto ee dhiirrigelinaya barnaamijkaaga moobiilka
Hawlaha Warbaahinta Bulshada - Waxaan u maleynayaa inaan u yeeri lahaa dhiirrigelinta oo aan ku biirin lahaa hal-abuurka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad la wadaagto awoodaha barnaamijka badiyaa bulshada social halkaasoo aad ka soo qaadan doonto isticmaaleyaal badan.
Saxaafadda - War-saxaafadeedyo, shaashadaha shaashadda, astaanta shirkadda iyo liisaska bogagga la beegsanayo si loogu sheego in barnaamijkaagii yimid!
Miisaaniyadda Suuqgeynta - Waxaad lahayd miisaaniyad horumarineed… waa maxay miisaaniyadda suuqgeynta ee abkaaga?
Kani waa liis hubineed oo weyn laakiin laba talaabo oo CRUCIAL ah ayaa maqan:
Dib u eegista App - Ka-dalbashada dib-u-eegista adeegsadayaasha barnaamijka moobiilku kuma koobna oo keliya inay kaa caawinayaan inaad hagaajiso oo aad hagaajiso nooca xiga ee dalabkaaga, waxay sidoo kale sare u qaadeysaa codsi aad u sarreeya xagga sare ee qiimeynta dalabaadka moobiilka.
Waxqabadka App - La socoshada waxqabadka dalabkaaga adoo adeegsanaya app Annie, SensorTower, ama Qaababka si loo kormeero darajadaada, tartankaaga, lacag sameynta, iyo dib u eegista ayaa fure u ah hagaajinta waxqabadka barnaamijkaaga moobiilka.
Tags: barnaamijka anniemuuqaaladadhiso app mobileliiska hubintasuuqa mobilada suuqaapp mobilebadhannada moobilkawaafaqid app mobiladafalanqaynta barnaamijka moobiilkanaqshadeynta barnaamijka moobiilkamiisaaniyadda suuqgeynta moobiilkalacag-abuurka barnaamijka moobiilkamadal app mobileQalabka saxaafadda ee moobiilkabarnaamijka mobilada sdkisdhaxgalka bulshada ee moobilka apphagaajinta dukaanka app-ka moobiilkabogagga dukaanka app-ka moobiilkaistaraatijiyad app mobileImtixaanka isticmaalaha moobiilkadareenka dareenkaduulista tijaabada